Andro Fahatsiarovana ny Tarika Beatles, Manamarika ny Fitsidihana Voalohany Nataony Tany Japàna · Global Voices teny Malagasy
Andro Fahatsiarovana ny Tarika Beatles, Manamarika ny Fitsidihana Voalohany Nataony Tany Japàna
Voadika ny 30 Jona 2017 11:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, русский, 日本語, 简体中文, English
Tonga ao Japàna ny Beatles. Pikasary avy amin'ny kaonty Youtube ofisialin'ny The Beatles.
Hajain'ny sasany toy ny Andro Fahatsiarovana ny Beatles any Japàna ny 29 Jona. Manamarika ny tsingerintaonan'ny nisehoan'ny Beatles voalohany indrindra tany Japàna tamin'ny 1966 ilay daty rehefa nanitsaka ny Haneda Airport teo afovoan'ny fotoanan'ny orana tany Japàna ary ny ampitson'iny nilalao tao amin'ny foiben'ny haiady Budokan tao Tokyo, voalohany tamin'ireo fampisehoana dimy holalaoviny tamin'iny fitetezam-paritra iny.
Ny 29 Jona, niparitaka be tao amin'ny Twitter Japoney tamin'ity taona ity ny tenifototra ビートルズ記念日 (Andro Fahatsiarovana ny Beatles), toy ny nizaràn'ny mpankafy maro ny fahatsiarovany sy fankafizany ny Beatles.
Heverina toy ny fihodinana teo amin'ny kolontsaina Japoney taorian'ny ady ny fitsidihan'ny Beatles tany Japàna tamin'ny 1966. Hoshika Rumiko, ilay japoney mpanao gazety voalohany nanao tafatafa niarahana tamin'ny Beatles tany Londona tamin'ny 1964, dia nanamarika tamin'ny 2016 ny fitsingerenan'ny faha-dimampolo taonan'ilay fitsidihana voalohany:
Teo amin'ny dimy andro latsaka kely teo monja ry Beatles no tao amin'ny firenena, fa ampy tanteraka hanovàna ny fiheveran'ny daholobe izany fitsidihana fohy izany. Fotana fohy taty aoriana dia nahatsapa ny olona fa tsy nanana safidy hafa afa-tsy ny hisafidy ny Beatles ry zareo.
Maro tamin'ireo orinasa lehibe ao Japàna amin'izao fotoana izao no niforona tamin'ny fotoana nahatongavan'ny Beatles voalohany tao Japàna tamin'ny 1966. Toy ny notaterin'ny Nikkei Asian Review, araka i Ryuichi Isaka, filohan'ilay mpaninjara goavana Seven & i Holdings, toa ”teny iraisam-pirenena kokoa noho ny Anglisy ” ny mozikan'ny Beatles.
Manao ahoana oh! ♬ Andro Fahatsiarovana ny Beatles izao aty Japàna. ?? Efa 51 taona izay nanomboka tamin'ny nahatongavany taty Tokyo.
Ankehitriny, mbola hiraina any amin'ny karaoke fisotroana toaka any Japàna ny hiran'ny Beatles toy ny mandritra ny fianarana taranja Anglisy any amin'ny kolejy Japoney. Mbola velona ihany koa ny ”kitsch”, na ireo zavatra tsy ahoan-tsy ahoana momba ny Beatles.
Andro Fahatsiarovana ny Beatles androany. Tia be ny Beatles ny ato an-tranonay. Tsy mba fantatro mihitsy raha tokony ho John Lennon ity saribakoly Winnie the Pooh ity na tsia.
Ary, toy ireo rehetra marobe mpankafy, manao fivahinianana masina amin'ny toerana manokana voamarik'ilay vondrona ny vahoaka Japoney.
?? Raha tia ny Beatles ianao, misy toerana 5 tsy maintsy tsidihanao ??
2) Mathew Street (any Liverpool)
5) (Avy amin'ny rohy) The Beatles Story, Liverpool
Mety ho miovaova ihany koa ny toetry ny fivahinianana masina.
Manao ahoana daholo oh. Androany no Andro Fahatsiarovana ny Beatles. Tamin'ity andro ity, tamin'ny 1966 , sambany tonga taty Japàna ny Beatles. Nanao fivahinianana masina tany Londona ireo mpandray anjara tao amin'ny sarimihetsika K-On!, ary nandeha tao amin'ny Làlana Abbey. Nanao toa izany koa izahay tamin'ny taona lasa iny.
Ary, toa ny mahazatra, hoezahan'ireo mpandraharaha ny hanararaotra an'ireo mpankafy mba hivarotana, toa ity mpivarotra “ramen” aoTokyo ity.
Miarahaba, Mutahiro Koya Ramen ihany ity! ? Androany no Andro Fahatsiarovana ny Beatles. Ary tokony ho karazana andro ohatry ny ahoana izany? Androany dia hihaino ny ”Yesterday / Omaly” aho eo am-pihinanana ramen ato amin'ny Mutahiro Koya. Izany no karazana andro hitranga. Noho izany, manantena izahay fa hanatevin-daharana anay ianareo!
Araho ny tenifototra ao amin'ny ビートルズ記念日 hahafantarana maromaro kokoa mikasika ny Andro Fahatsiarovana ny Beatles.
Hong Kong (Shina) 1 herinandro izay